POV – Ilontsera
Mila olona tia manaraka vaovao ary afaka mahatakatra ny tsatoka manodidina izany.
Mila mahay mamakafaka ka mandravona hevitra anaty sary iray.
Mila mahay sary kely ihany satria ilay sary no fitaovana anehoana izany. (Marihako anefa fa tsy ilàna mahay sary be ny fanaovana sary an-gazety satria fanehoan-kevitra no atao fa tsy zavakanto akory.)
Mahay ny mpanao sary an-gazety iray rehefa mafonja ny hevitra voizina kanefa mitombina sy rariny.
Mila mahatsikaiky ilay sary.